Mabasa 15 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mabasa Evaapostora 15:1-41
Nharo muAndiyoki panyaya yekuchecheudzwa (1, 2)
Nyaya yacho inoendeswa kuJerusarema (3-5)
Vakuru nevaapostora vanoungana pamwe chete (6-21)
Tsamba inobva kudare rinotungamirira (22-29)
Regai ropa (28, 29)
Ungano dzinokurudzirwa netsamba (30-35)
Pauro naBhanabhasi vanoparadzana (36-41)
15 Vamwe varume vakauya vachibva kuJudhiya vakatanga kudzidzisa hama vachiti: “Kana mukasachecheudzwa maererano netsika yaMozisi,+ hamuponeswi.” 2 Asi pashure pekunge Pauro naBhanabhasi vanetsana navo vachiitirana nharo navo, pakazorongwa kuti Pauro, Bhanabhasi, nevamwe varume vaende nenyaya iyi kuvaapostora nevakuru kuJerusarema.+ 3 Saka pashure pekunge vamboperekedzwa neungano, varume ava vakaenderera nerwendo rwavo vakapfuura nemuFenikiya nemuSamariya, vachinyatsorondedzera nezvekutendeuka kwevanhu vemamwe marudzi vachiita kuti hama dzese dzifare chaizvo. 4 Pavakasvika muJerusarema, vakatambirwa zvakanaka neungano nevaapostora nevakuru, uye vakarondedzera zvinhu zvakawanda zvakanga zvaitwa naMwari achivashandisa. 5 Asi vamwe vaimbova veboka revaFarisi avo vakanga vava vatendi, vakasimuka vakati: “Vanofanira kuchecheudzwa uye kurayirwa kuti vachengete Mutemo waMozisi.”+ 6 Saka vaapostora nevakuru vakaungana kuti vaongorore nyaya iyi. 7 Pashure pekunge vakurukura zvakadzama,* Petro akasimuka, akati kwavari: “Varume, hama, munonyatsoziva kuti kubva pakutanga ndini ndakasarudzwa naMwari pakati penyu kuti vanhu vemamwe marudzi vanzwe mashoko akanaka ndichivaparidzira, votenda.+ 8 Uye Mwari, uyo anoziva mwoyo,+ akaratidza kuti anovagamuchira nekuvapa mweya mutsvene,+ sezvaakaitawo kwatiri. 9 Haana kuita kuti pakati pedu navo patombova nemusiyano,+ asi akanatsa mwoyo yavo nekutenda.+ 10 Saka nei mava kuedza Mwari nekuisa pamitsipa yevadzidzi joko+ rakatadza kutakurwa nemadzitateguru edu kana nesu?+ 11 Isu tine kutenda kwekuti tinoponeswa nenyasha dzaIshe Jesu+ sekuponeswa kwavanoitwawo.”+ 12 Vanhu vese vakabva vanyarara, vakatanga kuteerera Bhanabhasi naPauro vachirondedzera zviratidzo zvizhinji nezvishamiso zvakanga zvaitwa naMwari achivashandisa pakati pemamwe marudzi. 13 Pavakapedza kutaura, Jakobho akati: “Varume, hama, ndinzweiwo. 14 Simiyone+ anyatsorondedzera matangiro akaita Mwari kufunga mamwe marudzi kuti atore vanhu vezita rake pakati pawo.+ 15 Uye izvi zvinoenderana nemashoko eVaprofita, sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: 16 ‘Pashure pezvinhu izvi ndichadzoka, ndomutsa zvakare tende* raDhavhidhi rakawa; ndichavakazve matongo aro rova sezvaraiva, 17 kuti vanhu vanosara vatsvage Jehovha* nemwoyo wese, pamwe chete nevanhu vemarudzi ese, vanhu vanoshevedzwa nezita rangu, ndizvo zvinotaurwa naJehovha,* iye ari kuita zvinhu izvi,+ 18 zvakazivikanwa kubvira kare.’+ 19 Saka ndiri kufunga* kuti tisaomesera vemamwe marudzi vari kutendeukira kuna Mwari,+ 20 asi kuti tivanyorere kuti varege zvinhu zvakasvibiswa nezvidhori,+ upombwe,*+ zvinhu zvakadzipwa,* uye ropa.+ 21 Nekuti zvakanyorwa naMozisi zvagara zviine vanozviparidza muguta neguta kubvira kare, uye zvichiri kuverengwa zvinonzwika mumasinagogi pamasabata ese.”+ 22 Vaapostora nevakuru, pamwe neungano yese, vakabva vasarudza varume pakati pavo ndokuvatuma kuAndiyoki vaina Pauro naBhanabhasi; vakatuma Judhasi ainzi Bhasabhasi naSirasi,+ avo vaitungamirira pakati pehama. 23 Zvavakanyora ndeizvi uye vakavatuma nazvo: “Vaapostora nevakuru, hama dzenyu; kuhama dzedu dzinobva kune mamwe marudzi dziri kuAndiyoki,+ Siriya, neKirikiya, tinoti: Kwaziwai! 24 Sezvo takanzwa kuti pane vamwe vanhu vakauya ikoko vachibva kuno vakakuvhiringidzai nezvavaitaura,+ vachiedza kukukanganisai, kunyange zvazvo tisina kumbovaudza kuti vadaro, 25 tabvumirana tese kuti tisarudze varume vekukutumirai pamwe chete nehama dzedu dzatinoda, Bhanabhasi naPauro, 26 varume vakaisa upenyu hwavo* pangozi nekuda kwezita raShe wedu Jesu Kristu.+ 27 Saka tatuma Judhasi naSirasi, kuti naivowo vataure nemiromo yavo zvinhu zvatakakunyorerai.+ 28 Nekuti mweya mutsvene+ nesu tasarudza kusakuremedzai nemimwe mitoro, kunze kwezvinhu izvi zvamunofanira kuita: 29 kuramba muchirega zvinhu zvakabayirwa zvidhori,+ ropa,+ zvinhu zvakadzipwa,*+ uye upombwe.*+ Kana mukangwarira kuti musaita zvinhu izvi, zvichakufambirai zvakanaka. Sarai zvakanaka!”* 30 Saka varume ava pavakanzi vachienda, vakasvika kuAndiyoki, vakaunganidza vanhu vacho vese, vakavapa tsamba yacho. 31 Pavakaiverenga, vakafara nekukurudzirwa kwavakaitwa. 32 Uye sezvo Judhasi naSirasi vaivawo vaprofita, vakataura zvinhu zvakawanda zvekukurudzira nekusimbisa hama.+ 33 Pashure pekunge vamboti garei ikoko, hama dzakazoonekana navo zvakanaka vakadzokera kune vaya vakanga vavatuma. 34 * —— 35 Asi Pauro naBhanabhasi vakasara muAndiyoki vachidzidzisa nekuzivisa mashoko akanaka eshoko raJehovha,* vaine vamwe vakawanda. 36 Pashure pemazuva, Pauro akati kuna Bhanabhasi: “Iye zvino ngatishanyirei zvakare hama mumaguta ese atakazivisa shoko raJehovha,* tinoona kuti dzakadii.”+ 37 Bhanabhasi aida chaizvo kuenda naJohani, ainzi Mako.+ 38 Asi Pauro akanga asingadi kuti vaende naye, nekuti akanga ambovasiya kuPamfiriya, akarega kuenda navo kubasa.+ 39 Izvi zvakaita kuti vapopotedzane zvikuru, zvekuti vakaparadzana; uye Bhanabhasi+ akaenda naMako kuSaipurasi nechikepe. 40 Pauro akasarudza Sirasi ndokuenda naye pashure pekunge anyengetererwa nehama kuti akomborerwe naJehovha.*+ 41 Akapfuura nekuSiriya nekuKirikiya, achisimbisa ungano.
^ Kana kuti “vaitisana nharo dzakaoma.”
^ Kana kuti “dumba; imba.”
^ Kana kuti “ndasarudza.”
^ Kana kuti “Muve neutano hwakanaka.”